5 Iziqiwi Zemvelo Ezingasoze Zalibaleka EYurophu | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Qeqesha Ukuvakasha eSwitzerland > 5 Iziqiwi Zemvelo Ezingasoze Zalibaleka EYurophu
5 Iziqiwi Zemvelo Ezingasoze Zalibaleka EYurophu
Qeqesha Ukuhamba i-Austria, Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi Czech Republic, Qeqesha Ukuhamba eFrance, Qeqesha Ukuhamba Germany, Qeqesha Ukuhamba Italy, Qeqesha Ukuvakasha eSwitzerland
Isikhathi sokufunda: 6 amaminithi(Kugcine ukubuyekezwa On: 24/10/2020)
Iziqongo zezintaba ezihlaba umxhwele, izigodi eziqhakazayo, izimpophoma, emachibini, nezilwane zasendle ezahlukahlukene, Ikhaya laseYurophu ezinqolobaneni zemvelo ezingenakulibaleka emhlabeni. Ukuchitha imali emazweni amakhulu aluhlaza aqhakaza entwasahlobo, 5 eziqiwini zemvelo ezinhle kakhulu eYurophu zivikelwe amapaki kazwelonke amukela abahambi abavela kuwo wonke umhlaba. Uma unesifiso sokuhamba ngezinyawo, ukuhamba, noma ukujabulela indawo engcwele yemvelo, lapho-ke uzothanda i- 5 iziqiwi eziphezulu ezingenakulibaleka eYurophu.
Izitimela kuyindlela enobungane kakhulu imvelo uvakashe. Lesi sihloko sabhalwa sokuba umuntu afunde izindlela zemininingwane Ukuvakasha esenziwa Londoloza Isitimela, I Eshibhe zemininingwane Amathikithi Iwebhusayithi In The World.
1. IBelluno Dolomite Reserve Reserve e-Italy
Indawo yokulondolozwa kwemvelo yaseBelluno yasungulwa ngo 1990 ukuvikela imvelo enhle yasendle yamaDolomites. Kutholakala emaphethelweni eDolomite ku enyakatho ye-Italy, Ipaki yemvelo yaseBelluno iyamangaza entwasahlobo. Amagquma aluhlaza nezintaba eziwumbukwane zimbozwe okhaphethi bezimbali. Akunandaba nezinga lakho lokuqina, uzoba nesikhathi esihle sokuhlola lesi siqiwu semvelo, ngoba kunezindlela ezahlukahlukene. Indawo yokulondolozwa kwemvelo yaseBelluno eYurophu ilungele bobabili abaqalayo nabahamba ngezinyawo abanolwazi.
32000 amahektha wezimbali ezingandile kanye nezindawo eziphakeme zamatshe amatshe, indawo yemvelo yaseBelluno isuka esigodini saseCismon iye esigodini sasePiave. Ukwehluka okunothile kokubili kusezilwaneni nasemasikweni ngenxa yamadolobhana amaningi asesigodini sasePiave. Ngakho-ke lapho uvakashela indawo yokulondolozwa kwemvelo yaseBelluno eYurophu, uthola ithuba lokuba nohambo olukhulu lokuhlola lwezimangaliso zemvelo namagugu amasiko.
Ungafika Kanjani EBenuno Nature Reserve?
Indawo yokulondolozwa kwemvelo yaseBelluno incane kune 3 ukuhamba ngesitimela amahora ukusuka eVenice.
Ngingahlala Ngaphi Eduzane neBelluno Park?
Kunamaqhugwane amaningi asezintabeni, B&B, namahhotela.
Kufanele Ngisebenzise Izinsuku Ezingaki EBelluno Nature Reserve?
Indawo ebekelwe iBelluno Dolomites ingenye yezindawo ezinkulu kakhulu futhi 5 iziqiwi eziningi ezingasoze zalibaleka eYurophu. Futhi, IBelluno yipaki enhle yemvelo, ngakho-ke kufanele usebenzise okungenani 3 izinsuku zihlola futhi zijabulela amachibi, izintaba, nobukhazikhazi bemvelo.
UFlorence waya eMilan amanani entengo
Amanani entengo e-Florence aya eVenice
EMilan kuya kuFlorence Amanani esitimela
IVenice eya eMilan Izintengo Zesitimela
2. Isiqiwu seHohe Tauern e-Austria
Isiqiwu esikhulu semvelo e-European Alps sise-Austria. Indawo yaseHohe Tauern iyikhaya le 10,000 kwezilwane, 1,800 izitshalo, kanye neGrossglockner, Inani eliphakeme kakhulu lase-Austria, ngesikhathi 4,798 amamitha ngaphezu kolwandle. Le ntaba evelele ihlala phakathi 200 ezinye iziqongo, izilwane eziluhlaza, amachibi entabeni, nezimpophoma.
Izigodi zeHohe Tauern reserve zemvelo zigcwele izinguzunga zeqhwa ezinhle kakhulu, lasendulo futhi ukubukwa okuhle emzaneni, okhaphethi bezimbali, namahlathi. Le paki yemvelo yaseYurophu iyindawo yezivakashi zayo nabahlali abanenhlanhla ezifundeni ezizungezile. Ngokuqondene, Umzila we-Umbalfalle Nature wezimpophoma nomfula, lapho uzobona khona ezinye izimpophoma ezimangalisa kakhulu e-Europe.
Ungafika Kanjani To Hohe Tauern Nature Reserve?
Isiqiwu seHohe Tauern siseduze kakhulu nedolobha laseMallnitz. IVienna eya eHohe Tauern ngesitimela cishe 5 amahora.
Ngingahlala Ngaphi Eduzane Hohe Tauern Park?
IMallnitz idolobha elidumile eHohe Tauern elinezindawo eziningi zokuhlala.
Kufanele Ngisebenzise Izinsuku Ezingaki E-Hohe Tauern?
Kunezinhlobo eziningi ezahlukahlukene izindlela zokuhamba izintaba eHohe Tauern isiqiwu semvelo, ngakho ukuhlela a 4-5 uhambo lwezinsuku lungcono kakhulu. Ngale ndlela ungabheka ipaki namadolobha aseduze.
EMunich kuya eSalzburg amanani entengo
IVienna kuya eSalzburg amanani entengo
I-Graz iye eSalzburg amanani entengo
I-Linz iya eSalzburg Izintengo Zezitimela
3. Ecrins Nature Reserve EFrance
Njengoba uhamba ngalesi siqiwu esimangalisayo e-French Alps, qiniseka ukuthi uqaphele izinkozi, izitende, i-willow grouse, nezinye izilwane eziningi zasendle eziyibiza ngokuthi yikhaya. Lesi siqiwu esimangalisayo e-European Alps singesinye sezihle amapaki esizwe uzoba nethuba lokuthola.
Izinguzunga zeqhwa, izintaba eziphakeme, izindawo eziphakeme eziluhlaza, nomoya ohlanzekile, Ubuhle be-Ecrins nokubukeka komhlaba kuzobamba umphefumulo wakho.
Ungafika Kanjani Ecrins Nature Reserve?
Ungafinyelela epaki likazwelonke le-Ecrins kusuka noma yikuphi eFrance. Indawo yokulondoloza imvelo itholakala eduze komngcele waseFrance ne-Italy. Kusondele eLyon, eMarseilles, naseGeneva eSwitzerland, ngakho ukuhamba ngesitimela unqamula iFrance kuya e-Ecrins kuyindlela enhle.
Ngingahlala Ngaphi Edound Ecrins Park?
Kusuka kumahhotela alungele umndeni kuya ekuqashweni kwamaholide, kunokuhlukahluka kwezinketho zokuhlala ezungeze isiqiwu se-Ecrins.
Kufanele Ngisebenzise Izinsuku Ezingaki Ku-Ecrins?
Kuphuma kuwe. Ukuthi uthatha isinqumo sokunikezela i- 7 izinsuku noma uye ekhefini langempelasonto, uzoba nohambo oluphuphayo ngokuphelele.
IMarseilles eya eLyon Izintengo Zesitimela
Amanani entengo eParis aya eLyon
Amanani entengo yaseLyon eya eParis
Amanani entengo yaseLyon kuya e-Avignon
4. ISaxon Germany Kanye neBohemian Switzerland Isiqiwi EsiseCzech Republic
Indawo emangalisayo yemvelo iSaxon Switzerland isuka eJalimane iye eCzech Republic. Izintaba zamatshe amatshe e-Elbe nokwakheka kwamadwala iPravcicka brana edume umhlaba wonke sezivele ziveze “iNgonyama, uMthakathi, ne-Wardrobe ”movie. Lesi siqiwu esimangalisayo singesinye seziqiwi ezingasoze zalibaleka eYurophu ezinemibono eminingi evumelana ne-Instagram phezulu komhosha.
Ehlobo noma ebusika, izindlela eziluhlaza, futhi imikhondo ibhalwe kahle futhi kulula ukuhlukanisa ezimileni eziluhlaza ezinhlangothini zombili zomhosha nomfula. ISaxon Germany, noma iBohemian Switzerland, kuya ngohambo lwakho lwasekuqaleni noma lapho uya khona ekugcineni, okuyi-oasis enhle nokuhamba izintaba kwabahambi abavela emhlabeni wonke.
Ungafika Kanjani KwaSaxon Germany Noma I-Bohemian Switzerland Imvelo Reserves?
Ungafika kule ndawo yemvelo emangalisayo ku- IYurophu ngohambo losuku kusuka ePrague noma eDresden.
Ngingahlala Ngaphi Eduzane Nesipaki Sikazwelonke?
Njengoba indawo yokulondolozwa kwemvelo isemngceleni weJalimane neCzech Republic, izinketho zokuhlala azipheli.
Kufanele Ngisebenzise Izinsuku Ezingakanani EBohemian Switzerland?
Uhambo losuku luyadingeka ngokuphelele, futhi uma ungachitha izinsuku ezimbalwa, ke kunconywa kakhulu.
ENuremberg kuya ePrague Amanani Esitimela
EMunich kuya ePrague Amanani Esitimela
Amanani eBerlin aya ePrague
IVienna iya ePrague Amanani Esitimela
5. I-Ordesa neMonte Perdido Reserve Reserve eFrance
Kutholakala phakathi nendawo phakathi kweSpain neFrance, I-Ordesa neMount Perdido zingenye yeziqiqi zemvelo ezimangalisa kakhulu eYurophu. Yize itholakala ohlangothini lwaseFrance enengqungquthela ye- 3,355 m. igama lentaba iMonte Perdido lithola igama lalo ngoba belingabonakali ohlangothini lwaseFrance lomngcele.
I-Ordesa Ekhangayo zombili i Indawo ye-UNESCO Heritage Heritage eYurophu kanye nendawo yokugcina izilwane zasendle nezilwane eziphilayo. Kuyikhaya lesigodi i-Ordesa, izimpophoma, izilwane zasendle ezahlukahlukene, kufaka phakathi ukhozi lwegolide, futhi 32 izinhlobo zezilwane ezincelisayo. Njengoba uhamba futhi ubabaza imibono yezintaba zasePyrenees, qiniseka ukuthi ubheka amaMarmot, OKlebe, nezikhova, kanjalo. Ngakho-ke, Isiqiwu i-Ordesa neMonte Perdido siyindawo emangalisayo futhi okuyiwa kuyo eYurophu nganoma yiluphi uhlobo lomhambi.
Kusukela 3 amahora ’kuya 2 uhambo lokuhamba ngezinsuku, I-Ordesa inikela ngemizila ehlukahlukene yokuhamba izintaba, emazingeni ehlukene wokuqina.
Ungafika Kanjani Esiqiwini Semvelo i-Ordesa?
Isiqiwi i-Ordesa neMonte Perdido siyatholakala kusuka eFrance naseSpain. Kusuka eZaragosa kuye eTorla-Ordesa kumayelana 5 amahora noma 3 amahora ukusuka eBarcelona. Uma uhambela eFrance, ke Toulouse kuyinto 7 amahora kude.
Ngingahlala Ngaphi Eduzane Ne-Ordesa Park?
Ungathola izinketho ezinhle zokuhlala eTorla, kusuka ezindlini zezivakashi nasemahhotela.
Kufanele Ngisebenzise Izinsuku Ezingaki E-Ordesa Nature Reserve?
I-Ordesa neMount Perdido zaziwa nangokuthi yipaki yaseYosemite eYurophu. Ngakho-ke, kufanele uhlale okungenani 3 izinsuku, kufaka phakathi izintaba nesikhathi sokuphumula.
5 eziqiwini ezingasoze zalibaleka eYurophu zinikeza ukubukwa okuhle nemizila yokuhamba izintaba ezimpophomeni ezinhle zomhlaba. Ngakho-ke, ukuhamba ngezinyawo ngaphesheya kwezigodi eziluhlaza, ukuncoma amasimu ezimbali neziqongo zezintaba kuyisipho esikhulu kunazo zonke ongazinika sona. Akukho okuphumuzayo nokukhuthazayo ukwedlula imvelo yasendle emazweni aseYurophu amangalisa kakhulu.
Amanani entengo eParis aya eRouen Train
Amanani entengo eParis aya eLille
Rouen to Brest zemininingwane Amanani
Rouen to Le Havre Izintengo Zesitimela
Lapha e Londoloza Isitimela, sizojabula ukukusiza uhlele iholide lakho ezindaweni zokulondolozwa kwemvelo ozikhethele zona ngesitimela.
Ingabe ufuna ukushumeka okuthunyelwe kwebhulogi lethu “Izindawo Zokulondolozwa Kwemvelo Ezingalibaleki Eziningi EYurophu” ungene kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://embed.ly/code?url =Https://www.saveatrain.com/blog/unforgettable-na .......-reserves-europe/ ‎- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
Ngaphakathi une izixhumanisi lwethu IsiZulu kokwehla Amakhasi, kodwa siphinde sibe https://www.saveatrain.com/ja_routes_sitemap.xml, futhi ungakwazi ukushintsha izilimi / ja ku / fr noma / de nokuningi.
Austrianaturereserve dolomitesiltaly naturereserve naturereservegermany naturereserveitaly naturereserveseurope travelgermany
5 Kuhle Yemvelo Hot Springs EYurophu
Ukuhamba Ngezitimela, Qeqesha Ukuhamba i-Austria, Qeqesha Ukuhamba iBrithani, Qeqesha Ukuhamba eFrance, Isitimela Sokuvakasha eHungary, Qeqesha Ukuhamba Italy
7 Kuhle Day Uhambo Kusukela Venice
Ukuhamba Ngezitimela, Qeqesha Ukuhamba Italy, Izeluleko Zokuhamba Ngezitimela, Izikhangibavakashi Europe
Mahhala Izitimela Lokhu Summer Ukuze Intsha
isitimela intsha, Qeqesha Ukuhamba iBrithani, Qeqesha Ukuhamba eFrance, Qeqesha Ukuhamba Germany, Izeluleko Zokuhamba Ngezitimela, Izikhangibavakashi Europe